Calanka TV – Jacbur
Dowladda Kenya oo dibadbaxyada ka mamnuucday saddex magaalo: SAWIRRO
by calanka —	October 12, 2017 —	Jacbur
Wiil Sacuudiyaan oo internetka ka shukaansaday gabar Mareykan ah oo la xiray: VIDEO
Wiilkan ayaa mudo isbuucyo ah waxa uu khadka internetka ka shukaansanayay gabar 21-jir ah taas oo deggan gobolka California islamarkaana lagu magacaabo Christina Crockett taas oo ay iska heleen tarta sida muuqaalka ah la isaga daawadi ee loo yaqaan “Youknow”.
by calanka —	October 12, 2016 —	Jacbur, Video
Mas sawirka neceb oo qaniinay nin sawir ka geli rabay: VIDEO
Koox niman ah ayaa waxa ay mas weyn kasoo gabteen goob iskool ah oo dalka Hindiya ku yaal, kaddib waxaa ay usoo qaadeen dhanka magaalada. Nin doonayay in uu sawir isaga qaado ayuu qaniinyo ku dhagay.
by calanka —	October 4, 2016 —	Jacbur, Video
Gabdhaha jabhadda FARC oo hubka dhigay: SAWIRRO
Kaddib heshiis dhawaan ay ku kala sixiixdeen dalka Cuba dowladda Colombia iyo jabhadda Farc ayaa waxaa lagu gaaray heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaal u dhexeeyay in ka badan 50 sanadood.
by calanka —	September 29, 2016 —	Jacbur, Sawirro
Eeyo tartan doon-wadis loo qabtay: SAWIRRO
Xeebta Huntington ee gobolkaasi California, Mareykanka ayaa waxaa lagu qabtay tartan cajiib badan kaas oo lagu tartansiiyay eeyo kuwaas oo waday doomaha lagu istaago islamarkaana biyaha ku dul socda.
by calanka —	September 27, 2016 —	Jacbur, Sawirro
Madaxweynaha Turkiga oo Muqdisho soo gaaray: SAWIRRO
by calanka —	June 3, 2016 —	Jacbur, Sawirro
Qoxooti ay soomaali ku jirto oo gaaray Talyaaniga: SAWIRRO
by calanka —	June 1, 2016 —	Jacbur, Sawirro